Iindaba ze-7 zokuhlela zazo zonke iintlobo zenyanga kaJuni | Uncwadi lwangoku
Inyanga entsha kunye izindululo ezitsha kunye nokuqaliswa kohlelo. Ihlobo kunye neeholide ziyasondela kwaye kuya kufuneka ucinge malunga nokuba zeziphi izinto ozifundileyo oza kuzipakisha Zezi Iindaba ze7 ezikhethwe kubo bonke abafundi kunye neentlobo ezahlukeneyo: inoveli emnyama, ehlekisayo, eyimbali, yothando, emnandi kunye neyencinci.
1 Istanbul Quince-Paolo Rumiz
2 Umbhalo wesandla waseBorges- uAlejandro Vaccaro
3 U-Anne Frank, intombazana engazange ilahle ithemba - uMaria Cecilia Cavallone
4 Umhlebi - UDonato Carrisi
5 Umdlalo ohlekisayo ka-Oscar Wilde-uJavier de Isusi
6 UTess Del Camino -Rachel Hartman
7 Ikhephu elibomvu ngoDisemba-uSimone Van Der Vlugt
Istanbul Quince -UPaolo Rumiz
Siqala nge ibali lothando, iphefumlelwe yibhaladi endala yaseBalkan, ebhalwe ngulo mbhali wase-Itali. IRumiz yaziwa ngokuba yiyo ingxelo yokuhamba, ngakumbi ezo ze IiBalkans, kwaye ubhale iinoveli, iincwadi zabantwana, kunye nemidlalo yeqonga.
Libali le UMaximilian von Altenberg, injineli yaseOstriya, ehambela ESarajevo ngo 1997. Apho, kwindawo yokucima ukoma, uve ibalad endala ecula UMaša Dizdarević, umfazi othabathela kuye ubuhle bakhe. Umtsalane uyafana, kodwa uMax kufuneka abuyele e-Austria kwaye akazukubuya iminyaka emithathu.
Umbhalo wesandla waseBorges -UAlejandro Vaccaro
En ngoJuni ikwayiyo Isikhumbuzo sokufa kukaJorge Luis Borges, ke esi sihloko kufanelekile ukuba sisikhumbule. I-porteño Alejandro Vaccaro yenye yezona zifundiswa zayo, ayilolize ukuba abe ngumongameli wangoku we-Borgesiana Association yaseBuenos Aires. Kule ncwadi imnyama tsu ulwaphulo-mthetho kunye nemicimbi zixutywe nothungelwano lwamapolisa kunye nesiseko sokukhwabanisa kunye imibhalo ebhaliweyo kaJorge Luis Borges njengeasi.
AnguFrank, intombazana engazange ilahle ithemba- UMaria Cecilia Cavallone
Ngaphakathi kwengqokelela Amaqhawe am amancinci kubafundi abancinci, oku ibali elinemifanekiso Kukulungele ukukuxelela ngobomi bomntu obalulekileyo kwiMbali njengoko yayinjalo UAnne ngokuphandle. Ityikitywe ngulo mbhali wase-Italiya, umbhali wemibhalo eliqela kunye neencwadi zobugcisa kunye namabali abantwana.
Umhlebi -UDonato Carrisi
Nuevo yovuyo lwengqondo ukusuka kwinkosi yohlobo olufana neCarrisi, eyaziwa ngokuba ngabathengisi bayo behlabathi Umzingeli wobumnyama, Inkosi yezithunzi o Intombazana enkungwini.
Goran gavila, intloko yeqela lezaphuli mthetho, kunye UMila Vasquez, umphandi okhethekileyo ekukhangeleni abanyamalalayo, bajongane nenye yezo Ukubulala kugcwele iimfihlakalo. Kwaye ngeli xesha iindlela zombulali azifani nayo nayiphi na into oyibonileyo ngaphambili.
Udidi oluNgcwele luka-Oscar Wilde -UJavier de Isusi
Kwisabelo se udidi Oku kuvela kuJavier Isusi kuza kuthi malunga nenani lombhali waseIreland Oscar Wilde sele kurhatyele. Kuyo ucinga ntoni unokudlula ngaphakathi komphefumlo wakho kwiminyaka emithathu yokugqibela kaWilde ejele.
UTess del camino -URachel Hartman
El uhlobo lwefantasy izisa inoveli entsha ngalo mbhali waseMelika, umbhali we Seraphina.
Sikwi Ubukumkani be Goredd, apho abafazi kulindeleke ukuba babe ngamanenekazi; yamadoda, ukuba bayabakhusela kunye neempungutye, abazizirhorho zokuzisebenzisa. Umlinganiswa ophambili, Tess, ayingeni nakweyiphi kwezi ndidi zintathu, kuba yahlukile. Ikwayifayile ye- Utata womzali kaSeraphina. Ngenye imini ubeka usapho lwakhe kubungqina kwaye bathatha isigqibo sokumthumela kwikhaya loonongendi. Kodwa uTess uzicheba iinwele, aziguqula njengendoda, kwaye ashiye uhambo oluya kwi-Southlands apho alindelwe khona zizinto ezininzi.
Ikhephu elibomvu ngoDisemba -USimone Van Der Vlugt
Ndiphela ngo inoveli yembali, entsha evela kulo mbhali odumileyo nowaziwayo waseDatshi, opapashe zombini ezi ncwadi zenzelwe ulutsha kunye nemincili.
Sikunyaka 1552 xa isibhengezo sele siza kubakho Iminyaka engama-XNUMX yemfazwe. ENetherlands, U-Lideweij ongumKatolika osemncinci uthandana nogqirha wamaProtestanti. Nangona utata wakhe engafuni, uyabaleka naye. Esi sibini sihlala Breda apho umyeni abekwa njengogqirha ka UWilliam waseOrange. Xa, kunye noFelipe II, yonke into itshintsha ibhinqa eliselula kufuneka baleka kwidolophu encinci apho bacinga ukuba bakhuselekile. Kodwa kukho intlekele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » I-7 yokuhlela entsha yazo zonke iindidi zenyanga kaJuni
Ngentlonipho yonke, "Umhlebi" ayikho enye into ngaphandle kokuphinda anikwe esinye isihloko sencwadi "iingcuka" ngumbhali omnye ... Ayinakuthathelwa ingqalelo njengobutsha .. Ingaphezulu kweminyaka eli-10 ubudala. Ndizilandela kancinci ke ndifuna ukwenza le ngcaciso. Konke okugqibelele